Dibadbaxayaal careysan ayaa weeraray booliska rabshadaha ka hortaga iyo koox Islaamka neceb… – Hagaag.com
Dibadbaxayaal careysan ayaa weeraray booliska rabshadaha ka hortaga iyo koox Islaamka neceb…
Dibedbaxayaal careysan ayaa weerar aan kala reeb laheyn ku qaadeen booliska rabshadaha ka hortaga iyo koox islaamka neceb kuwaas oo maanta isu-soobax ku dhigtay bannaanka hore ee baarlammaanka dalka Norway.
Kooxda soo abaabushay isu-soobaxa lagu bahdilayay Islaamka ayaa lagu magacaabaa SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) oo micneheedu yahay “jooji islaameynta Norway”, waxaana mudooyinkan dambe ay sare u qaadeen dhaq-dhaqaaqooda oo ay marwalba rabshado kala kulmaan .
Isu-soobaxa maanta oo ay boolisku aad u waardiyeynayeen ayaa mar qura xargaha goostay kadib markii xubin ka mid ah ururka SIAN oo haweeney ah ay jeex-jeexday baalal ka mid ah kutubka qur’aanka, ayna candhuuf ku tuftay iyadoona ugu dambeyn ku tuurtay dhanka dibadbaxayaashii kasoo horjeeday.
Haweeneydan falkan lagu bahdilay kutubka sameysay ayaa lagu magacaabaa Fanny Bråten, waxaana mar qura la cararay booliska kadib markii ay eryadeen dibedbaxayaal careysan.
Weerarkan ayaa waxaa haweeneydan kasoo gaaray dhaawac fudud oo u badan haraanti iyo feer.
Xaaladda ayaa markaas kadib kasii dartay, waxaana la weeraray booliskii goobta joogay.
Tiro ka mid ah dibedbaxayaasha ayaa xabsiga loo taxaabay, mana cada wali khasaaraha booliska gaaray marka laga reebo gawaaridooda oo lagu dur-duriyay.